Exclusive: अन्तत: डलरे भन्नेलाई किरणको यस्तो जवाफ ! प्रेम सम्वन्धमा छन् त? तत्काल अमेरिका फर्किदै (भिडियो हेर्नुहोस) - Public 24Khabar
Home Videos Exclusive: अन्तत: डलरे भन्नेलाई किरणको यस्तो जवाफ ! प्रेम सम्वन्धमा छन् त?...
कति अभागी रहेछिन दिलमाया सुनार। आज फेरी उनलाई चोट माथि चोट थापियाको छ। आज भन्दा ठिक २,३ महना अगाडि दिल माया सुनार संग हामीले कहु कुराकानी गरेका थियौ।
जिवन बाट हरेश खाइसकेकि दिलमायालाई फेरी अर्को बज्रपात परेको छ। स्वरको हिसाबले असाध्धै मिठो गाउने दिलमाया यति बेला मृत्युको नजिक पुगेकी छिन।
मृगौला रोग संग लडिरहेकी छिन। डाक्टरको रिपोर्ट आयको छैन उनि भन्छिन मृगौला फेल भयको हुन सक्छ। एउटा मात्र भय त् ठिकै हियो दुवै भयो भने मा कसरि बाच्ने ? रुदै मिडियामा आयकि दिलमायालाइ सहयोग बोकेर यतिबेला लोकप्रिय गायक राजु परियार पुगेका छन्। नेपालि लोक संगीतका राजा राजु परियार दिलमायाअको यो पिडा र दर्द सम्झेर भक्कानिन्छन।
गित गाउने सपना बोकेकी दिलमायालाई गित गाउँका लागि भनेर आयको सहयोग रकम थियो यो। इशा फ़ाउण्डेशनका सम्रक्षक आदरणिय इन्द्र थापा र साबि थापाको तर्फा बाट उनलाई गित गाउनका लागि पठाइएको यो सहयोग रकम यतिबेला कारण बस उपचारको लागि दिन बाध्य भयका छन।
उनि भन्छिन मर्नु अगाडि गित गाउने सपना छ दाइ पुरा नहोला जस्तो छ, चाडै छ। त्यो कुरा सुनेर सबैका आसु रसाएको छ। दिलमायालाई सबैले सहयोग गरिदिनुहोला। उनको गायिका बन्ने सपना पनि बिचैमा नटुङ्गियोस भन्न चाहान्छौ। उनि रोगबाट पनि हरेस खाने परिस्थिति नबनोस। हजारौ नेपालि मनहरुले उनको लागि साथ सहयोग र हौसला प्रदान गर्नुभयको छ।
Previous articleभर्खरै फुट्यो एमाले: माधव नेपालले खोले नयाँ पार्टी, यस्तो छ, चुनाव चिह्न खुला किताब (भिडियो हेर्नुहोस) सहि कि गलत?
Next article१४ दिनको सुत्केरि महिला यसरी रुदै बच्चा बोकेर भोकभोकै माग्दै बाटोबाटो (हेर्नुस् भिडियो )